ယင်း၏အကြီးအသောမြေဆီလွှာပေါ်သို့သငျသညျခြေလျင် step ယခုအချိန်တွင်နေဖြင့်ရထားအီတလီနှင့်အတူလွခံရဖို့အဆင်သင့် Get. သမိုင်း၏မြေယာ, ခမ်းနားဗိသုကာ, လွှမ်းမိုးသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကြော့, ခေတ်မီခြင်းနှင့်ကောင်းစွာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သောလူသင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တိုင်အောင်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်! လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုသိရန်လိုခငျြ? ရထားအီတလီနိုင်ငံ ပို. ပင်အံ့မခန်းကိုသင်စိတ်ကူးနိုင်သည်ထက်ဖြစ်ပါသည်!
Trenitalia, လူအပေါင်းတို့သည်အမျိုးသားရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူအမျိုးသားရေးရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှု; ဒါဟာပုံမှန်မြန်နှုန်းရထားဖြစ်ပါသည်.
အကောင်းဆုံး option ကိုရထားနဲ့အီတလီနိုင်ငံထုတ်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်, နှင့် လုံခြုံဘက်မှာဖြစ်: စျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်, အကောင်းဆုံးကိုသင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်သင့်ခရီးသွားမြေပုံကိုက်ညီသော option ကိုရက်စွဲများနှင့်ကြိမ်နှင့်တွေ့ပါ. အချိန်ဇယားနှိုင်းယှဉ်ဖို့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ. သငျသညျဖြစ်နိုင်ဝေါဟာရများနှင့်အတူရောထွေးပါလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသင်အပေါ်ကိုရှာဖွေမည်အတိုကောက်ပုံစံများဖြစ်ကြောင်း Trenitalia site ကို:
သင်အွန်လိုင်းရထားလက်မှတ်အားဖြင့်သင့်ရဲ့အီတလီဘွတ်ကင်လုပ်ရန်ဒါမှမဟုတ်ဘူတာမှာဒါဟာ Buy သင့်တယ်
ရထားအီတလီနိုင်ငံရန်သင့်လက်မှတ် booking အကြောင်းကိုဂရိတ်သတင်းအွန်လိုင်းဘွတ်ကင်စနစ်များကိုအပြစ်ကင်းစင်စွာအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်စူပါယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင်းဖြစ်ပါသည်. ဘူတာ နေရာတိုင်းနိုင်ပါတယ် ပြည့်ကျပ်သော - သူစိတ်ဖိစီးမှု၏အမျိုးအစားလိုအပ်ပါတယ်, မှန်သော? သငျသညျစာအုပ်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ, သင်၏အဘို့အပေးဆောင်ဖို့ option ကိုပေးအပ်ထားတယ် အွန်လိုင်းရထားလက်မှတ်. သို့သျောလညျး, သငျသညျအလိုအလျောက်အကြောင်းကိုအားလုံးမှန်လျှင် - သင်ကဘူတာရုံရမှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းနှင့် သင့်ရဲ့လက်မှတ်ဝယ်ယူ ထိုအခါ.
သင်မည်သို့သင့်ရဲ့လက်မှတ်ရပြီဆိုတာနဲ့သင်ဟာရထားအီတလီနိုင်ငံမှ Get Do
သငျသညျမီးရထားဘူတာရုံအားဖြင့်အီတလီနိုင်ငံရသည့်အခါ, သင်၏နောက် cue ကြီးမားတဲ့ကာစရာကုလားကာဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်. သင်လိုအပ်သည့် updated သတင်းအချက်အလက်အားလုံးရကြလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ. သင်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုမမွငျဘူးဆိုရငျ, ကြီးမားသောအရာတစ်ခုခုအောက်မှာရပ်နေလူတွေကိုတစ်လူအစုအဝေးအဘို့ကိုကြည့် - နဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့! ကိစ္စတွင်သင်သည်သင်၏ရထားချက်ချင်းစာရင်းစောငျ့ရှောကျဘူး, စိုးရိမ်မစတင်နိုင်ပါဘူး. သငျသညျမှာ "Partenze" မှာရှာကြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ (ထွက်ခွာရာ) အစား "Arrivi" ၏ (ဆိုက်ရောက်ရာ) စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်. လူအပေါင်းတို့၏အနည်းဆုံးရှုပ်ထွေး option ကိုရထားနံပါတ်နှင့်ထွက်ခွာအချိန်အားဖြင့်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ရထားကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာ, BIN "ကိုရှာပါ,"binario" အတွက် " (ပလက်ဖောင်း). သငျသညျခွဲထားခဲ့သည်ကြောင်းရင်းတပြိုင်နက်, သငျသညျသှားဖို့မှန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/guide-to-italy-by-train/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)